Iindaba -Yintoni ibhola enzulu ye-groove ethweleyo?
Ayizizo zonke iibheringi zebhola ezifanayo. Iindidi ezahlukeneyo zoyilo ziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno ezithile, ke ukuba awuyonjineli okanye umboneleli (nokuba wenza ngamanye amaxesha), akusoloko kulula ukukhetha ezona zilungele iimfuno zakho.
Thatha enye yeentlobo ezixhaphakileyo ezisetyenziswayo zokuthwala - iibheringi zebhola emseleni. Kungenxa yokuba isetyenziswa rhoqo ayithethi ukuba ilungile kwisicelo sakho. Makhe sijonge kwimizuzu embalwa elandelayo ngolwazi oluthe kratya.
Ngaba iibheringi zebhola ze-groove ezinzulu zikhethileyo namhlanje? Nxibelelana nathi namhlanje ngayo nayiphi na imibuzo.
Iimpawu zebhola ye-groove enzulu
Ukuthwala ibhola emseleni wenzulu kulunge kakhulu ekuphatheni umthwalo omkhulu kunye nesantya sokubaleka ngokukhawuleza. Bangakwazi ukumelana nemithwalo ye-radial kunye ne-axial limited (okanye thrust) imithwalo. Ngamafutshane, lukhetho olufanelekileyo nokuba ibhola enzulu ye-groove iya kuba noxinzelelo olusetyenzisiweyo kumacala omabini e-shaft (i-radial) kunye nakwishafti (i-axial).
Nali inqaku elilungileyo elichaza umahluko phakathi kwemithwalo ye-radial kunye ne-axial thrust.
Izinto eziluncedo zokuthwala nzulu ibhola emseleni
Ukongeza kwizinto eziguquguqukayo, iibheringi zebhola emseleni zinika izibonelelo ezininzi, kubandakanya:
· ukusebenza okuzolileyo kunye nokunciphisa ukuqala kwetorque
· ukhetho oluninzi lokuthambisa / ukuthambisa
Ubuncinci beenkonzo okanye iimfuno zolondolozo
Ukusetyenziswa kwebhola ye-groove ebanzi
Ngoku ukuba unokuqonda okungcono malunga nokuba zeziphi iibheringi zebhola enzulu, nolu uluhlu lwamashishini axhomekeke kuwo ngokubanzi:
· Ukulungiswa kokutya
· izixhobo zomatshini
· Ukucwangcisa izixhobo
· kaloliwe kunye nezothutho
· Amandla omoya
Izisombululo ngentando ziyafumaneka
Ixesha leposi: Dec-18-2020